आजवाट सोह्रश्राद्ध सुरु भयो । हिन्दु धर्मको मान्यताअनुसार पितृ दोषका कारण व्यक्तिहरुलाई कयौं बाधा र कठिनाइहरु आइपर्छन् । त्यसैले पितृपक्षमा मानिसहरुले आफ्नो कर्मलाई सुधार्ने र कुलको रक्षाका लागि पूर्वजहरुको प्रार्थना गर्ने गर्दछन् । आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल प्रतिपदासम्मका १६ वटा तिथिमा दिवङ्गत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिदादान र पिण्डदान गरिने भएकाले सोह्र श्राद्ध भनिएको हो । […]
खुशी हुनको लागि यसो गर्नुहोस्
खुशी हुनका लागि स्वस्थ मन र स्वस्थ शरीर आवश्यक पर्छन् । खुशी हुन र भइरहन गर्नुपर्ने केही कुरा यस्ता छन्ः ‘पर्फेक्सन’को मोह त्याग्नुस् संसारमा कोही पनि सम्पूर्ण अर्थात् पर्फेक्ट हुँदैन । त्यही भएर ‘मेरो चिउँडो ठूलो भयो, आँखामा दाग छ, नाक चुच्चो भयो’ जस्ता कुरामा चिन्ता नलिनुस् र ‘ममा जस्तै कुनै कुराको कमी सबैमा हुन्छ’ […]
कंचनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि भएको हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा को हो भन्ने पत्ता लगाउन सकेको छैन । एउटा बालिकामाथि भएको बलात्कार त्यसमाथि हत्या हुँदा पनि अहिलेसम्म हत्यारालाई सजाय दिन सकेको छैन । हाम्रो जस्तो समाजमा दिनानुदिन महिला हिंसा, बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको छ । तर यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिरहेको […]
स्मार्टफोन स्वास्थ्यका लागि घातक, कारण यस्तो छ
स्मार्टफोन आधुनिक समयको माग हो र अब यो मानिसको अपरिहार्य वस्तु बनिसकेको छ । स्मार्टफोनले मानिसको त्यसमाथिको निर्भरता दिनानुदिन बढाउदै गइरहेको छ । तर स्मार्टफोन हाम्रा लागि जति उपयोगी छ, त्यति नै यो हाम्रो स्वास्थ्यका लागि घातक पनि छ । यसको धेरै उपयोगले युवाहरु छिट्टै बृद्ध बन्ने खतरा निम्तिएको छ । एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको […]
बेलायतमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्रामलाई युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा सबैभन्दा खराब असर पार्ने मिडिया प्लेटफर्म भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वेक्षणमा १४ देखि २४ वर्षसम्मका १ हजार ४ सय ७९ जना सहभागी थिए । सहभागीहरूलाई पाँच लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालका विकल्प दिइएका थिए । उनीहरूले ती सञ्जाल प्रयोग गर्दा हुने व्यग्रता, डिप्रेसन, एक्लोपन, अरुलाई खसाल्ने […]
अधिकाँश मानिसलाई सेकुवा (पोलेको मासु) खुव मनपर्छ । र दशैं जस्ता चाड पर्वमा त पोलेको मासुको उच्च खपत हुने गर्छ । दशैमा खाने खसीको वा राँगाको मासुलाई रातो मासु भनिन्छ जुन स्वास्थ्यका दृष्टिले घातक मानिन्छ । चिकित्सकहरुले पोलेको मासु रक्सी भन्दा पनि हानीकारक रहेको र यसले क्यान्सरको खतरा उच्च पार्ने चेतावनी दिएका छन् । अझै […]
आज राष्ट्रिय बालदिवस । विशेषगरी आजको दिन बालअधिकार रक्षा र संरक्षणको लागि विभिन्न संसस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनाउँदै छन् । वि.सं. २०२१ साल भाद्र ४ गतेदेखि मनाउन शुरु गरिएको राष्ट्रिय बालदिवस २०६३ सालमा आएर भाद्र २९ गते मनाउन सुरु गरियो । बालबालिकाहरुको हक र हितको लागि यो दिवस मनाउने गरिन्छ । देशका विभिन्न ठाउँहरुमा ‘बालबालिकाको […]
वैज्ञानिकहरुले यस्तो बढि भुल्ने समस्याको कारण खास पौष्टिक तत्वको कमी रहेको बताएका छन् । हामीले यहाँ यस्ता केही खानेकुराको सूचि पेश गरेका छौँ जसको नाम नै ब्रेन फूड छ । यी खानेकुरा खानाले मानिसलाई अल्जाइमरको जोखिम नहुने मात्र होइन मस्तिष्कको क्षमता र स्मरण शक्ति समेत बढ्छ । गोलभेँडा : गोलभेँडामा प्रोटिन, भिटामिन, तथा विभिन्न खाले […]
किशोरावस्था हुँदा तपाईँको स्मरणशक्ति एकदमै बलियो थियो, जे कुरा पनि सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो । तर अहिले हिजोकै कुरा पनि सम्झिन गाह्रो परिरहेको छ, यस्तो किन हुन्छ? के तपाइँले प्रायः स-साना कुरा पनि झ्वाट्टै भुलिहाल्नुहुन्छ ? महत्वपूर्ण कुरा समेत भुसुक्कै बिर्सने बानी छ ? जो मानिस बढि भुलक्कड हुन्छन् उनीहरु भुलेको कुरा सम्भिएसँगै किन यस्तो कुरा […]
चुम्बकको विशिष्ट गुण
ब्रह्माण्डमा रहेका प्रत्येक पदार्थको आफ्नै गुण भए जस्तै चुम्बकीय पदार्थको पनि आफ्नै गुणहरु हुन्छन् । अझ म्याग्नेटिक पदार्थहरुमा अन्य पदार्थमा नभएका विशिष्ट गुणहरु समेत हुन्छन् । विशेष गरी म्याग्नेटिक पदार्थ भन्नाले यहाँ कोबल्ट, आइरन, निकेल, र म्याग्नेटाइट उदाहरणको रुपमा लिइएको छ। यी धातुहरुमा विशेष खालको चुम्बकीय गुण हुन्छ जसलाई “स्वभाविक चुम्बकीय” भनेर चिनिन्छ । स्वभाविक […]
ब्रह्माण्ड पुराण अनुसार भाद्र शुक्ल पक्षको पंचमी तिथिलाई ऋषि पंचमी भनिन्छ । पौराणिक कथा अनुसार चतुर्थी युक्त पंचमी तिथि ऋषि पंचमीको लागि ग्राह्य मानिन्छ । भविष्योत्तर पुराणमा भनिएको छ भगवान ईन्द्रले त्वष्टा ऋषिको छोरा वृत्तासुरलाई मारेपछि ब्रह्माजीले भगवान ईन्द्रले गरेको पापलाई मोचन गर्न त्यो पापलाई चार ठाउँमा बाँडिदिए । जसअनुसार पहिलो पापको पूल्ठो अग्निको धूँवा […]
मानिस जहिलेपनि सफलताको खोजीमा हुन्छ । सफल हुने धेरै उपायहरु हुन्छन् । सबै सफल मानिसहरु एकै पटक सफलता चुम्न सफल बनेका होइनन् । तर नियमित आफ्नो काममा ध्यान दिन सकेमा सफलता हात पार्न कुनै गाह्रो छैन । तलका केहि निम्न उपायहरु लागु गर्न सके जीवन सार्थक र सफल बनाउन सकिन्छ । खतरा सँग नडराउनुहोस् : […]
तीज र पछिल्लो समयमा बढेका विकृति
तीज हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको एक महत्वपूर्ण पर्व हो । यो पर्व भाद्रशुक्ल पक्ष तृतीयाका दिनमा पर्दछ । धार्मिक कथनअनुसार हिमालयपुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी व्रत बसेकी र उनको व्रत पूर्ण भई महादेव पति पाएको दिनलाई हिन्दू नारीहरूले हरितालिका तीजका रूपमा मनाउँदै आएका छन् । हिन्दू धार्मिक ग्रन्थ अनुसार राजा हिमालयले आफ्नी छोरी पार्वतीको कन्यादान भगवान […]
फेसबुकको मेसेन्जरमा स्टोरीज आएपछि वाक्क, दिक्क नै भइयो । त्यसको विकल्प खोज्ने क्रममा पहिले त फेसबुक र मेसेन्जर एप दुवै मोबाइलबाट हटाएर ब्राउजरमा चलाउन थालेँ । त्यसको केही दिनपछि फेसबुक लाइट र मेसेन्जर लाइट चलाउन पुगेँ । फेसबुक लाइटको ‘एप एक्सपिरियन्स’ खासै गतिलो लागेन र फेरि केही हप्ता पछि फेसबुक एपमा सरेँ तर फेसबुक मेसेन्जर […]
आजको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा
हिजो नेपाली समाजमा शिक्षामा चल्तीको कथन थियो, ‘छोरा बिग्रे कमर्श, छोरी बिग्रे नर्श’ व्यवसायीकताका विकास नभइसकेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मार्न चिकित्सकीय क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगती हुन नसकेको तत्कालिन समयमा कमर्श पढेका छोराहरु बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था थियो भने नर्श अर्थात परिचारिका पढेका र त्यो सम्बन्धि दक्षता हासिल गरेका छोरीहरु पनि बेरोजगारै बस्नु पर्ने थियो । […]
अचेल तीज लाग्नु भन्दा अगाडि नै हाम्रा मिडिया र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालहरू ‘तीजमय’ हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालका महिलाहरू धेरै अगाडि देखि नै शुभकामना आदान-प्रदान गर्छन् र प्रोफाइल फोटो पनि रातो सारी वा रातो लुगा लगाएको हाल्छन् । एक किसिमले तीजको आगमनले पुरै सामाजिक सञ्जाल ‘रातै’ देखिन्छन् । एकातिर सामाजिक सञ्जाल रातो हुन्छ भने अर्को तर्फ […]
काउलीको फूल (Cauliflower)को सतहमा पानीले भिजे जस्तो खैरो हुने (Browning) के कारणले हो? यस्तो समस्याबाट कसरी वच्न सकिन्छ ? यस्ता विकृति/लक्षणहरु वोरन सुक्ष्म तत्वको कमीले गर्दा हुन्छ । शुरुमा कोपीको सतहमा पानीले भिजे जस्तो दाग देखिन्छ।पछि खैरो भई विक्री/खानयोग्य हुँदैन।यसको निराकरणको लागि जमीनको तयारीको समयमा ५००–७०० ग्राम वोरयाक्स वा सोडियम वोरेट प्रति रोपनी अथाव ०.२५–०.५०% […]
फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यस्ता छन् केहि उपायहरु
प्रत्येक घरवाट दैनिक औसत ५ केजी फोहोर निस्किने गर्दछ । सहरमा हेर्ने हो भने एकै घरमा एक भन्दा बढी परिवार रहने भएकाले फोहोर यो भन्दा बढी निस्किरहेको अवस्था छ । तर यसरी तपाई घरमा उत्पादित फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? भए भरका फोहोरलाई एउटै प्लाष्टिकको झोलामा खाँदखुँद पारेर नगरपालिकाको गाडी आएको बेला पठाउनुहुन्छ वा छुट्टाछुट्टै […]
केही समय वा वर्ष बिदेश बसेर नेपाल फर्किएका हाम्रै नेपालीहरूले ‘फर्केर आउँदा नेपालको तस्वीर उदेक लाग्दो पाएँ’ भनेर बताउँदा मलाई त्यो मान्छेप्रति भाउन्न भएर रिस उठ्थ्यो । जिन्दगीको विडम्बना, आँफूलाई पनि परदेशी नै हुन केही विवशता र जीजीविषाका रहरहरूले वाध्य बनाए । एकाध वर्षमा स्वदेश फर्किनु पर्ने सन्दर्भ र परिस्थिति आउने नै भए, आखिर हाम्रा […]